७३ प्रतिशत मतदान, पहिलो चरण उत्साहपूर्ण : ३ केन्द्रमा मतदान स्थगित – Page 280271 – Etajakhabar
७३ प्रतिशत मतदान, पहिलो चरण उत्साहपूर्ण : ३ केन्द्रमा मतदान स्थगित
काठमाडौं – पहिलो चरणअन्तर्गत तीन प्रदेशमा आइतबार भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ७३ प्रतिशत मत खसेको छ । २० वर्षपछि नागरिकले आफ्नो घरदैलोको सरकार छान्न मतदानमा उत्साहजनक सहभागिता जनाएका छन् । प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाका २८१ स्थानीय तहमा पहिलो चरणमा मतदान भएको हो । दुई वटा तहमा यसअघि नै प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका थिए । आइतबार दोलखा, काभ्रे र कालिकोटका एकएक स्थानमा मतदान स्थगित भएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार तीनै प्रदेशमा ७३ प्रतिशत मत खसेको छ । सबैभन्दा बढी भक्तपुरमा ८३ प्रतिशत मत खसेको छ भने रसुवामा ८२ प्रतिशत मत खसेको छ । काठमाडौंमा ७५.५ प्रतिशत मत खसेको छ भने ललितपुरमा ७९.७६ प्रतिशत मत खसेको छ । सबैभन्दा कम मनाङमा ५३ प्रतिशत, म्याग्दीमा ६८ प्रतिशत र तनहुँमा ६९ प्रतिशत मत खसेको छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ७९ प्रतिशत मत खसेको थियो । निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू आयोगले प्रारम्भिक विवरण संकलन गरेको र देशभर मतदान भएपछि मात्र एकिन तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकिने बताउँछन् ।
आयोगले आइतबार बिहान ७ देखि साँझ ५ बजेसम्म मतदानको समय निर्धारण गरे पनि बिहानैदेखि मतदान केन्द्रमा मतदाताको भीड लागिसकेको थियो । युवा पुस्तादेखि ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, किरियापुत्री, दृष्टिविहीनसम्मले निकै उत्सुकतापूर्वक मतदानमा सहभागिता जनाएको निर्वाचन आयोगले उल्लेख गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले पहिलो चरणमा जनताको उत्साहले जेठ ३१ गते निर्धारित दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुन मतदातालाई उत्साहित बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुुभएको छ । ‘केही छिटफुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण, उत्साहजनक र मतदाताको व्यापक सहभागितामा मतदानकार्य सम्पन्न भएको छ’, प्रमुख आयुक्त यादवले भन्नुभयो, ‘मतदाताले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा देखाएको यस व्यापक सहभागिताप्रति आयोग हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।’
४ महानगरपालिका, १ उपमहानगरपालिका, ९२ नगरपालिका र १८६ गाउँपालिकामा प्रमुख÷उपप्रमुखसहित वडाध्यक्ष, महिला वडाध्यक्ष, दलित महिला वडाध्यक्ष र खुला महिला वडाध्यक्ष निर्वाचनका लागि मतदान भएको हो । पहिलो चरणबाट नगरप्रमुख÷अध्यक्ष २८३, उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष २८३, वडाध्यक्ष २,५९८, महिला वडा सदस्य २,५९८, दलित महिला वडा सदस्य २,५९८ र खुला ५,१९६ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । प्रमुख वा अध्यक्षमा १ हजार ७ सय २३ पुरुष र १ सय ५७ महिला उम्मेदवार छन् । उपप्रमुखमा भने महिलाको संख्या निकै बढी छ ।
उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पुरुष २ सय ५७ र महिला १ हजार १ सय २७ उम्मेदवार छन् । वडाध्यक्ष पुरुष १ हजार २ सय ९६ जना र महिला ४ सय ४८ जना उम्मेदवार छन् । पहिलो चरणको निर्वाचनमा कुल मतदाता ४९ लाख ५६ हजार ९२५ रहेकोमा ६ हजार ६ सय ४२ मतदान केन्द्र थिए । २८३ स्थानीय तहअन्तर्गत मनाङ जिल्लाको नारपूm गाउँपालिका र डोल्पा जिल्लाको शेफोक्सुन्डो गाउँपालिकामा यसअघि नै निर्विरोध निर्वाचन भइसकेको थियो । मतदान कार्यपछि सबै मतपेटिका सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ल्याइपुर्‍याइएका छन् । हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका विकट मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका संकलन गर्न आयोगले हेलिकोप्टरको व्यवस्था गरेको थियो । मतदानकार्य सम्पन्न भएका स्थानीय तहका मतपेटिका सम्बन्धित स्थानीय निकायको मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा प्राप्त भएपछि मतगणनाप्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकालगायत कतिपय स्थानमा आइतबार रातिबाटै मतगणना सुरु हुँदैछ । तीनवटा मतदान केन्द्रमा मतदानकार्य स्थगित भएको आयोगले जनाएको छ । काभ्रे जिल्लाको नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं. ४ को मतदान केन्द्र र कालीकोटको कालिका गाउँपालिकाको बालाचौर आधारभूत विद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रको मतदानकार्य स्थगित भएको आयोगले जनाएको छ । दोलखा जिल्लाको मेलुङ गाउँपालिकाअन्तर्गत सत्येश्वर माविमा रहेको मतदान केन्द्रमा सुरक्षाकर्मीको कारबाहीमा एकजनाको निधन भएको र त्यस केन्द्रको मतदानकार्य पनि स्थगित भएको आयोगले जनाएको छ ।
मतदाता परिचयपत्रको प्रयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन आयोगलाई सहयोग पुगेको जनाइएको छ । मतपत्र ठूलो हुनु, छोटो समयमा तयारी गर्नु, मतदाता शिक्षा प्रदान गर्न समय कम हुनु, बेलैमा राजनीतिक सहमति कायम नहुँदा उत्पन्न अन्योलबीच भएको तयारीप्रति आयोगले सन्तोष व्यक्त गरेको जानकारी प्रमुख आयुक्त यादवले दिनुभयो ।
३ केन्द्रमा मतदान स्थगित
स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा अराजक र हिंसात्मक घटनापछि तीनवटा मतदान केन्द्रमा मतदानकार्य स्थगित भएको छ । काभ्रे जिल्लाको नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं. ४ को मतदान केन्द्र र कालीकोटको कालिका गाउँपालिकाको बालाचौर आधारभूत विद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रको मतदानकार्य स्थगित भएको छ । आयोगका अनुसार दोलखा जिल्लाको मेलुङ गाउँपालिकाअन्तर्गत सत्येश्वर माविमा रहेको मतदान केन्द्रमा सुरक्षार्थ सुरक्षाकर्मीको कारबाहीमा एकजनाको निधन भएको छ । उक्त केन्द्रको मतदानकार्य पनि स्थगित भएको छ । ती मतदान केन्द्रहरूमा निर्वाचनको नयाँ मिति तोक्ने जनाइएको छ ।
२ तहमा निर्विरोध
मनाङ जिल्लाको नारफू गाउँपालिका र डोल्पा जिल्लाको शेफोक्सुन्डो गाउँपालिकामा उम्मेदवारहरू निर्विरोध निर्वाचन भइसकेको आयोगले जनाएको छ । दुई तहमा जनप्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भएकाले ती स्थानमा मतदान भएन ।
Posted on: Monday, May 15, 2017 Time: 7:17:03
राजिनामा दिएको केहिदिनपछि गोकुल बास्कोटाले यो के गरे ?
कोरोना भाइरसका कारण चीनमा कुकुर, विरोलो र सर्पको मासु खान प्रतिवन्ध
११०औ अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस मनाउन, पुर्व तयारी गर्दै कोहलपुर नगरपालिका
साहसी पराक्रमी सैनिक जवान मछिन्द्र, जस्ले बचाए क रे न्ट ला गे र ज ल्दै गरेको ब्यक्तिलाई
पूर्वडीआइजी खरेलले किन छोडे ज्ञानेन्द्र शाहीको साथ ? घोषणा सभावाट बाहिरिए खरेल
बच्चा बोकेको महिला माथि ला’ठी हा’न्ने प्रहरी इन्सपेक्टर का र वाही हुने, छानविन सुरु
७ महिने बच्चा सहित २ बालक अलपत्र छोडेर फिल्मी शैलीमा आमाबाउ बे’पत्ता: १४ दिनको सुत्केरीले स्याहार्दै ‘यिनलाई खुवाउने दुध पनि छैन भन्दै यसरी रो’इन्’ (भिडियो हेर्नुस्)
पूर्वसांसद रहेका बुवाले आमालाई बो’क्सी भन्दै निकालेपछि छोरीको मार्मीक शन्देस: ‘मेरो आमालाई बो’क्सी नभन्नुस्, हाम्रो डिएनए जाँच गर्नुस्’ (भिडियो हेर्नुस्)
-13840 second ago
-13461 second ago
-12707 second ago
प्रहरीको कु’टाईबाट हिमाको जिउभरि नि ल डा’म ! प्रहरीलाई का र’बा ही नगरे राष्ट्रपतिको गेटमा नां’ गै बस्छु भन्दै आ’ क्रो शित (हेर्नुस् भिडियो)
-9145 second ago
-8063 second ago
-3417 second ago
-2128 second ago